Faallo: Hodan Naaleeye Waxay Aheyd Astaan Rajo iyo Dhibbane Xuriyadda Hadalka – Goobjoog News
in amaanka, Gobalada, Wararka Dalka, Warbixin Gaar ah
Warbaahinta Goobjoog Media Group ayaa marka hore waxaa ay tacsi u dirtay ehelada, asxaabta shaqo wadaagta ahaayeen iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka baxeen weriyeyaasha Hodan Naaleeye iyo Axmed oo ku dhintay qarax 12-kii bishan ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland.
“Waxaan dalbaneynaa in la dhowro xuquuqda aadanaha iyo xuriyadda hadalka, isla markaana ay xuriyad shaqo ka helaan dadka ka shaqeeya warbaahinta “ ayaa lagu sheegay qoraalka Goobjoog.
Sidoo kale, Goobjoog waxaa ay bogaadisay cid walba oo ka xanuunsatay geerida labada weriye gaar ahaan gabadha “Hodan Naaleeye waxaa ay aheyd mid muujineysay kartida iyo tayada gabdhaha Soomaaliyeed”.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay in Hodan Naaleeye ay u bixin-doonaan abaalmarin sanadle ah.
“Iyada oo la xurmaynayo nolosha halabuurnimo ee Hodan Naaleeye, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay bixin doontaa inshaallah (Abaalmarinta #HodanNalayeh). Sanad waliba waxa aanu guddoonsiin doonnaa qof aan u aqoonsannay in uu wax muuqda qabtay oo ka tirsan Qurbajoogga Soomaaliyeed. Nala soco si xog dheeraad ah u heshid”. ayaa lagu qoray bogga faceboogga wasaaradda.
Dhinac kale geerida Hodan waxaa ka tacsiyeeyey ra’isul wasaaraha Canad iyada oo hey’ado badan oo dalkaasi ay xuseen, qaarkoodna si gaar ah abaalmarin u balanqaadeen.
Barnaamijka Ogaal Oo Ka Hadlay Xiriirka Ka Dhaxeeya Garsoorka, Shareecada iyo Dhaqanka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS Oo Kulan La Qaatay Madax ka Tirsan Qaramada Midoobay
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa...
Kaydka Goobjoog Select Month May 2021 (24) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)